China Ibhetri evuthayo Iziqhano S67B mveliso kunye nabenzi | Ngomhla
[7.4V 2200MAH Ibhetri e-Li-ion egcwalisekayo] Iiglavu ezifudumeleyo zibandakanya ibhetri ye-lithium-ion egcwalisekayo. phezulu. Ukuba ufuna ukwenza imidlalo okanye ukusebenza ngaphandle ixesha elide, cebisa ukuthenga iibhetri ezingaphezulu (ezithengiswa zodwa).
[Izinto zokufudumeza ukuvaleka umva wesandla kunye neminwe emi-5 kude kube neengcebiso zeminwe] le glavu yombane inyuselwe ukusebenzisa izinto zokufudumeza i-infrared kude ezigubungela umva wesandla kunye neminwe.
[3 Umlawuli weSetingi yokuFudumeza] Ezi glavu zishushu kunye nezicwangciso ezintathu zobushushu ezahlukeneyo, unokuzilungisa ngokulula. Umbala obomvu we-LED siseto esiphakamileyo, umbala omhlophe we-LED siseto esiphakathi, umbala o-Blue LED siseto esezantsi. Cebisa uhlengahlengiso kuseto oluphezulu kwimizuzu engama-20 yokuqala usebenzisa, emva koko utshintshe useto oluphakathi. Ke inokusebenzisa ixesha elide ngaphandle.
[Impahla ethambileyo yokuphefumla kunye neSensor yeTouch] Ezi Gloves zishushu zisebenzisa i-softshell engangeni manzi.Ngaphakathi kunye noboya obuthambileyo kunye nezinto ezifakiweyo .Kwakhona iiglavu ezinee-sensors zokuchukumisa kumnwe wesalathiso ziya kusebenza kuso nasiphi na isixhobo esibukhali. Ezi gloves zobushushu ziqinisekisiwe ukubonelela ngobushushu obunamandla kunye nentuthuzelo ngelixa sisenza imidlalo kwimozulu ebandayo
[100% Ukubuyiselwa kweMali yeMali] iwaranti yonyaka omnye.
Ifanelekile kwimidlalo yangaphandle: Iiglavu zokufudumeza zamadoda nabasetyhini zilungile kwimidlalo eyahlukeneyo yangaphandle ngeentsuku ezipholileyo okanye ezibandayo, ngakumbi zilungele ukukhwela ikhephu.
❖Itekhnoloji eNtsha Fokanye Hukutya System
* Umlawuli: Amanqanaba amathathu oMgangatho woLawulo loBushushu; Itekhnoloji yeBluetooth yiApp; Itekhnoloji yokulawula ngaphandle kwamacingo; Ukwahlula -stage isilawuli sevesti;
* Izinto zokuFudumeza Pad: Carbon fiber, Ifayibha edityanisiweyo, ingcingo yokuFudumeza ingxubevange.
Ngoku, ifayibha edityanisiweyo ikhuselekile ngakumbi, izinzile kwaye ifudumeza ngokukhawuleza.
* Isimbo segloves sokushushubeza Pad-Iphedi yokufudumeza ende esonge izandla, ngoko ke iincam zomnwe zishushu, hayi kwiminwe emihlanu kuphela.
❖ Hukutya Isisombululo: 3.7V / 5V / 7.4V / 12V
Isatifikethi seFektri: ISO / SGS / Uphicotho lweCOSTCO GMP
Isiqinisekiso seiglavu / iikawusi: I-CE / FCC / UL / ROHS
Inkqubo yokufudumeza: CE / FCC / UL / ROHS / PSE
Egqithileyo Wt004 ibhatyi
Okulandelayo: Iziqhano zebhayisikili ezishushu zentsimbi nge-CE S28B
Ibhetri egcwalisekayo evuthayo yeGlave Liner Thin He ...